Author Topic: Su'aal: Sidee lagu garan karaa lafta jabtay inay bogsatay? (Read 2436 times)
« on: February 18, 2017, 05:46:55 PM »
marka hore ilaahay baan u mahad celinayaa. waxaan kale oo aad u salaamayaa, dhammaan diktoorada iyo hawl wadeenada caafimaadka ee bulshadeena u adeega. waxaan leeyahay aad baad walal u mahadsan tihiin. intaa ka bacdi 2 suaal baan qabaa, kuwaas oo ah.
1...sidee lagu garan karaa lafta jabtay inay bogsatay?.
2...suaasha kallena waa cartuurta marka lagu kabo bool (bolt) ama screw ma qasab baa in dib loo qalo oo birta ama boolka lagasoo saaro, mise waa loo dayn karaa?.
Re: Su'aal: Sidee lagu garan karaa lafta jabtay inay bogsatay?
« Reply #1 on: May 23, 2017, 09:03:46 PM »
In laftu kabantay waxaa lagu fahmo in raajo ama sawir la saaro qofka, midda kale birta la galiyay nuuceeda ayay ku xiran tahay, qaar dib baa loo soo saaraa, qaarka kalane meeshooda ayaa lagu daayaa. Fadlan la tasho dhakhtarkii kabay cunugga, midda kale jab walba wuxuu leeyahay muddo loogu talagalay inuu ku kabmo, haddii aad ii sheegi lahayd meesha uu cunugga ka jaban yahay, waan kuu sheegi lahaa inta kabniinku uu qaadanayo.
Views: 50230 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 26922 January 06, 2012, 10:02:19 PM
Views: 86892 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 54700 February 16, 2016, 10:07:14 PM
Views: 87898 April 08, 2011, 09:07:47 PM